Manchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii gate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii gate
Manchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii gate
Taphoota Priimer Liigii torbaan kana geggeeffameen kilaboonni hedduu rukutaman, qabxii gatan Liivarpuuliifi Niwuukaasel Yunaayitid dha. Liivarpuul harka Manchastaritti fundura daawwattoota 75,000 tti kan 3 – 0 gara mana isaa Aanfilditti geggeessame. Liivarpuuliif kuni rakkoodha; torbee dabres qabxii gate waan ta’eef. Manchastariif injifannoon kuni wolitti aansee isa 6ffaa yoo ta’u, gabatee Priimer Liigii bakka 3ffaa irratti akka oo’ifatu isa godheera. Tapha kana irratti goolii eegaan Manchastar Yunaayitid David De Gea dinqisiifannaa guddaa daawwattoota biraa argateera. Liivarpuul hiree uume hundatti fayyadamuu dhabuun kufaatii kanaaf isa saaxileera. Manchastariif goolii kan laakkofsiisan Roonii, Mataa fi Fan Parsii dha.
Torbaan dabre adeemsi Cheelsii Niwuukasiliin gufatee ture. Torbaan kana garuu Cheelsiin milkaayee gara injifannootti deebi’eera. Cheelsiin garee Huul wojji taphatee 2 – 0 injifate. Injifannoo Cheelsiif Haazaard sababa guddaa ta’uu danda’eera. Haazaard ufii isaa goolii galchuu bira dabree Diyaagoo Koostaafis haala mijeesseera.
Niwuukaasil torbee dabre Cheelsii qaanessee qabxii gachisiise. Torbee kana garuu, innumtuu niqaanahe; haraka Arsenaalitti. Arsenaal 4 – 1 Niwuukaasil Yunaayited injifate. Kuni kan ta’e dirree Emireetis irratti. Arsenaal goolii Tziruudhaan daqiiqaa 15ffaa irratti kan dursa fudhate. Tziruun daqiidaa 58ffaa irrattis goolii lammaffaa isaa galchuu danda’eera. Goliin lamaan hafan Kaazoorlaa dhaan daqiiqaa 54ffaa fi 88ffaa irratti kan laakkofsiisaman. Niwuukaasiliif Peereez ture goolii takka duwwaan bahuu irraa isaan baraarte kan laakkofsiise.
Bifuma wolfakkaatuun tapha Manchastar Siitii fi Leester jiddutti geggeeffameen Siitiin 1 – 0 moo’ateera. Manchastar Siitiif Laampaard kan goolii kiyyoo keessa marmarse.
Sadarkaa kilaboota Priimer Liigii as tuquun ilaalaa.
kilaboota priimer liigii
taphoota priimer liigii
Previous articleIndooneesiyaan dubartoonni poolisii ta’uu barbaadan qormaata dubrummaa dabrutu irraa eegama jetti
Next articleIggitiin magaalaa Siidnii sa’aa 16 booda du’a nama 3 xumurame